पुरै गाउँ जेल लग्ने तयारी, वडाध्यक्ष्य सहित १२ पक्राउ, के सुष्मा जेल जान्छिन त ? पूरा हेर्नुहोस भिडियो सहित – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Video/पुरै गाउँ जेल लग्ने तयारी, वडाध्यक्ष्य सहित १२ पक्राउ, के सुष्मा जेल जान्छिन त ? पूरा हेर्नुहोस भिडियो सहित
यसको मतलव उक्त घटनामा केटा र केटीको तर्फबाट दलित, जनजाती र कथित ठुलो जात भनिने मल्ल ठकुरीहरु पनि संलग्न देखिन्छन् । तर मृतकका परिवारले यो घटनाका घट्नुमा अन्तरजातीय विभेदकै रुपमा लिएका कारण केहीले त्यस विषय पनि अथ्र्याएका छन् । तर केटी पक्षका आफन्त हरुले अन्तरजातीय भनेर विभेदलाई स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुले गाउँको लागि यो नौलो कुनै अन्तरजातीय प्रेम वा विवाहको विषय नै नभएको बताएका छन् । सोती गाउँमा नै दलितको छोरी मल्ल परिवारले र मल्ल परिवारले दलितको छोरी लिएर कुनै भेदभावबिनै सहज तरिकाले घरव्यवहार चलाएको तीनचार वटै उदारहणहरु छन् । त्यसकारण दलित र गैरदलित बिचको खाडल नै समस्याको मु्ल जड हो भन्ने हालसम्म कुनै आधिकारिक पुष्टि छैन ।